Fandikana ny lalàn’ny fifamoivoizana: iray hetsy hatramin’ny iray tapitrisa Ar ny lamandy | NewsMada
Ho henjana ny lalàna nasiam-panavaozana mikasika ny fifamoivoizana sy ny fampiasana ny lalana. Toy izany koa ny famaizana ho an’ireo mandika izany. Tokony ho fantatry ny besinimaro izany ka navoaka ny torolalana ho an’ny mpampiasa lalana.
Ho hentitra ny fanjakana amin’ireo mbola mandika lalàna amin’ny fifamoivoizana sy ny fampiasana ny lalana. Nohamafisina ny sazy ho azy ireo, araka ny nampahafantarina omaly, nandritra ny atrikasa fampahafantarana ny torolalana vaovao ho an’ny mpampiasa lalana. Tsy vitan’ny fitazonana ilay fiara na fampidirana “fourrière” intsony ny sazy hihatra amin’izy ireo fa hiampy fandoavana lamandy iray hetsy hatramin’ny iray tapitrisa Ar mihitsy.
Tsy vitsy ny nitaraina, araka ny hita tany amin’ny tambajotra sosialy any, noho ny hafitsok’ireo mpitatitra na ny taxibe. Na izany aza, mbola misy ireo tsy maty voalavo an-kibo, tsy miraharaha ny lalàna velona sy ny bokin’andraikitra ary manao tsinontsinona ny mpandeha ka manao izay tiany hatao. Ao ireo mirimorimo mety hampidi-doza ny mpandeha. Tsy lazaina intsony ny fihodinana eny antenantenan-dalana, izay tena mampijaly ny mpanjifa, indrindra rehefa hariva ny andro. Manginy fotsiny ny teny tsy misy fanajana na ny ompa mihitsy aza, toa ilay nanjo ilay polisy tao anaty taxibe, tsy ela akory izay. Tsy vitsy koa ny olon-tsotra mitondra fiara, tsy manaraka ny lalàna, na ny mahakasika ny fitondrana fiara na ny momba ny fahatomombanan’ny fiara entiny ka mety hampidi-doza ho an’ny tenany sy ny hafa.
Antenaina fa hanova ny fahazaran-dratsin’ireo mpampiasa lalana izao fanamafisana ny lalàna sy ny sazy hampiharina amin’ireo mandika izany izao. Heverina ihany koa fa tsy ny mpitondra fiarakodia sy moto ihany no hovoakasik’izany. Tokony tsy ho afa-bela amin’izany koa ny mpandeha an-tongotra sasany, tsy manaja ny faritra natao ho azy. Ao koa ireo mihevi-tena ho tompon’ny lalana, toy ireo mpanamboatra moto sy mpivarotra, mibahana ny sisin’arabe ka manery ankolaka ny mpandeha an-tongotra hidina an-dalambe.
Mipetraka sy mihatra ny lalàna. Antenaina fa tsy hisy intsony koa ny firaisana tsikombakomba eo amin’ny mpanara-maso ny fampiharana izany (ireo mpitandro filaminana) sy ny mpitatitra na ny kolikoly, izay mampandringa ny fisorohana ny loza sady fositra amin’ny fampandrosoana ny firenena.
Hisy tahiry ho an’ny vonjy aina
Ankoatra izany, misongadina ao anatin’ity torolalana ho an’ny mpampiasa lalana ity koa ny fisian’ny tahiry ho an’ny vonjy aina, rehefa misy lozam-pifamoivoizana. Araka izany, tsy tokony hisy intsony ny fijerijerena fotsiny ireo olona maratra noho ny lozam-pifamoivoizana, rehefa tonga any amin’ny toeram-pitsaboana na hopitaly, araka ny tranga fahita matetika sy efa mampitaraina ny maro.
Nandray anjara tamin’ity atrikasa, omaly teny Antaninarenina, ity ireo sehatra samihafa (miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana) voakasiky ny fifamoivoizana an-dalambe. Anisan’izany ny minisiteran’ny Fitaterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetr’andro, ny mpitandro filaminana (polisy sy zandary), ny mpitatitra isan-tsokajiny ary ny avy amin’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly (Bianco).
Nampahafantarina azy ireo ny andraikitr’izy ireo tsirairay avy amin’ny fampanajana na fanajana ny lalàna, ho fisorohana ny loza sy hiadiana amin’ny kolikoly. Tamin’ny taona 2008 no nivoaka ny torolalana momba ny fampiasana ny lalana. Nasiam-panatsarana izany ka nampidirina ao ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana, araka ny fanazavan-dRamiandrasoa Stéphanie, hatrany.
Tsiahivina fa nasiam-panitsiana ihany koa ity lalàna mikasika ny fifamoivoizana ity, ny taona 2017. Raha ny zavatra hita, vitsy ny mampiasa lalana, ny mpamily sy ny mpandeha an-tongotra mahalala ny votoatiny. Izay ny nahatonga ny fampidirana azy ao anatin’ilay torolalana momba ny fampiasana ny lalana. Asa izay naharitra dimy volana. Haparitaka ho an’ny mpampiasa lalana rehetra sy ireo mpitantana isan-tsokajiny ary ny mpitandro filaminana ity torolalana ity, mba hisian’ny firindran’ny fifamoivoizana sy hisorohana ny loza.